Esikhathini endaweni ewugwadule yase-Pacific Ocean ngasemathuneni okuthiwa mkhathi (48 ° 52 'S lat, futhi 123 ° 23 ..' S e ..) - Nemo Point, wawuqamba yokudumisa iqhawe owaziwa kwezincwadi imisebenzi adventure-eqanjiwe Jules Verne ( elinye igama - Pole ka inaccessibility). Izwe eliseduze - a isiqhingi elincane Ducie - uku-2 688 km enyakatho Point Nemo. Kukulo muzi lapho, ngaphansi ungqimba amagagasi olwandle, baye bathola isiphephelo sabo sokugcina 145 "intuthuko" we Russian Federation, 4 isikhala iloli HTV Japan futhi 5 yizimpahla othomathikhi ATV kosmokorabley, okuqondene European Space Agency. Futhi, emathuneni ophethe izinsalela mkhathi 6 "Khonzani" futhi sasemkhathini "Mir".
Ngaphandle kabusha ukusetshenziswa
Ngokwemvelo, ayikho sasemkhathini (noma mkhathi) akuncikile elwandle eliKhulu iPacific yinye, zonke zazo ziye amuncwa mass yamanzi ifomu imvuthuluka ezinkulu ngabanye. Ngokuba iningi mkhathi contact emkhathini kuyingozi kakhulu, abazi kuhlela nokuvikeleka ezishisayo, ngokungafani bavimba Uzalo mojuli. Mkhathi Emangcwabeni iPacific Ocean iye kuthathwe esifubeni yayo labo iziteshi esemkhathini nesikhala amaloli ukuthi ekuqaleni akekho wayehlela ukubuyela Earth ukuze iphinde isetshenziswe. Lezi mkhathi, ngokuba ezingqimbeni obukhulu engezansi emkhathini woMhlaba, wabhubhisa bese ishiswa. Kodwa izingcezwana ngabanye ukufinyelela kwamanzi eMhlabeni, ngakho ekubizweni endaweni elahla imithambo elingasekho empini futhi ephansi Umhlaba orbit ( "mkhathi amangcwaba") buyafaneleka futhi kufaneleka.
Umlando Amaphuzu Nemo has eziphuthumayo ezimbili. Ngo-1979, e-US isikhala doti "Skylab," esiteshini, lafinyelela amanzi square okunemibandela hit yonke ingxenye esentshonalanga ye-Australia-mpumalanga yezwe. Futhi ngo-1991, izinsalela esiteshini Russian esemkhathini "Salyut -7" kancane wawela phezu kwendawo yakwa-Argentina. Ngenhlanhla, zombili izimo ezingalindelekile elashwe ngaphandle umonakalo ebalulekile futhi abalimala womuntu. Mkhathi emathuneni - endaweni eyingozi. Yingakho ngo kwentwasahlobo ka-2001, ngesikhathi decommissioning we "Mir" eziyinkimbinkimbi esemkhathini, uhulumeni of Japan, Australia kanye Fiji wanxusa izakhamuzi uyeke uhambo futhi aphephele endlini.
Minyaka yonke, emathuneni isikhala imikhumbi elwandle eliKhulu iPacific is agcwaliswa kweshumi eziningana mkhathi. Ngokusho kochwepheshe, umphakathi wamazwe omhlaba aqala umkhuba wokuhlangana kokulahla doti ngosizo imikhumbi yezimpahla abangele umonakalo appreciable ukuba esimisweni semvelo somhlaba. Ngokweyame iziteshi izikhukhula kanye nemikhumbi, ukuthuthukisa imithombo yabo, linezingxenye yabo zithwesiwe imikhiqizo imfucuza Space ohambweni nenye imfucumfucu. Ngokuvamile, ngaphezu kobuso bamanzi Pacific Ocean ukufinyelela ezithile refractory izakhi umkhumbi (ashise kakhulu ngokuphelele emkhathini), okuyinto, ngemuva ekushoniseni phansi 4 amakhilomitha ukujula.
Phezu kokuthola izithombe elilandelayo wathumela Curiousity rover ukuba Iplanethi Ebomvu, iningi Ufo abathanda nentshisekelo kuyabonakala asemigodini ongaziwa kuyi-Mars. Yaluphenduphendula benza isibalo ezizathwini ngemvelaphi yabo. Enye inguqulo ithi umphakathi ukuthi lezi asemigodini kukhona imikhondo lokufikela njengabafokazi mkhathi - ke azisa ibhulogi UFO Sightings Daily. Ngokusho omunye wabahlanganyeli ekucubunguleni, lezi asemigodini ziye zatholakala ngaphambili the Moon. Ngesikhathi anomalies efanayo esethilayithi nasemahhovisi esifundazwe zemvelo, futhi akazange ayithole indlela enengqondo. Ngokombono ngazwi linye ngokuthi ufologists wathola izinhlobo zosizo Lokudabuka yokufakelwa futhi ukumela unique isikhala kwethulwa noma emathuneni mkhathi. Izithombe zithunyelwe emphakathini, namanje posted on the Ufo blog. Ngokusho kwenye inguqulo, wathola ayimigodi akuzona ezingaphezu kuka uwuyise lapho uzolungiswa khona, lapho UFOs abangu serviced. Kodwa umbono wokuthi rover Curiousity emathuneni wathwebula mkhathi on Mars sekuthandwa kakhulu.
I ibhande elisemkhathini elise phakathi Jupiter ne-Mars, wathola nendikimba ethile esemkhathini ububanzi ukuthi idlula 550 km. Lokhu elisemkhathini ngokuthi Vesta, ososayensi, ngokusho mbono othandwayo, insali yokubhubhisa Phaeton iplanethi, kanye kuhlale izidalwa ezihlakaniphile. Cishe esikhathini esingangonyaka esidlule ukuze impela ibanga ngokunyenya Uphenyo lwakhe okuzenzakalelayo "Dawn" (USA), NASA, kanye iqoqo agcwaliswa izithombe ezinemininingwane acacile ebusweni. Ufologists, sihlola izindawo okwakubulawelwa kuzo izithombe, wathola abanye, izinto ezithakazelisayo ongaziwa phezu Vesta. I izithombe kusolakala uphawu disk agugile ezimise UFO, kancane ezifihlwe ngaphansi ukufana indiza phansi nezinye isakhiwo eziyinqaba. Ososayensi baye asikho isizathu sokukholelwa ukuthi lezi zinto banendabuko eliwumhlaba. Ezimweni eziningi, lokhu komkhondo impucuko ezazikhona Chaise emathuneni noma kwenye UFO. Iqiniso lokuthi ochwepheshe bathole isakhiwo flying, ezihluke kakhulu kunokuba nomunye, wabavumela ukuba singaphethi ngokuthi imikhumbi okungewakho impucuko ezahlukene ezisemkhathini. Ngakho akukhona kuphela ezitholakala kuyi-Mars Mkhathi emathuneni, kodwa kude West.
Nokho singenakwenzeka esikhathini esizayo esiseduze lesintu uzokwazi ufunde kabanzi mayelana nokuthi i-zobuciko ezitholakele. ohambweni bavimba-Mars kanye Vesta ukuthumela okwamanje akekho ohambayo. Zonke imibono eyayisinesikhathi ahlale eziningi yesayensi.
Aluminium dishware eziyingozi noma cha? Kufanele ngisebenzisa aluminium Cookware?
Indlela ukubhaka inkukhu kuhhavini